2 Tantara 19 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 19
Nanome tsiny an'i Josafata, Jehò mpaminany, noho ny nihavanany tamin'i Akaba - Fanatsarana ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana.
1Nony niverina soa aman-tsara ho any an-tranony ao Jerosalema Josafata mpanjakan'i Jodà, 2dia nitsena azy Jehò, mpahita, zanak'i Hananì, ka hoy izy tamin'i Josafata mpanjaka: Tokony hampiana va ny ratsy fanahy? Ary ny mankahala an'ny Tompo va no tianao? Noho izany dia ao aminao ny fahatezerana avy amin'ny Tompo. 3Saingy mba nisy soa hita taminao ihany, fa nesorinao tamin'ny tany ny aserah ary niraiki-po tamin'ny fitadiavana an'Andriamanitra hianao.
4Nitoetra tao Jerosalema Josafata ary noteteziny indray ny vahoaka, hatrany Bersabea, ka hatrany amin'ny tendrombohitr'i Efraima, dia nampivereniny amin'ny Tompo Andriamanitry ny razany. 5Nanendry mpitsara amin'ny tany izy, amin'ny tanàna mimanda, amin'i Jodà, isan-tanàna. 6Ka nilaza tamin'ny mpitsara izy nanao hoe: Tandremo izay hataonareo, fa tsy ho an'olombelona no hitsaranareo, fa ho an'ny Tompo; izy no homba anareo rahefa mitsara hianareo. 7Ka aoka ho ao aminareo ny fahatahorana an'ny Tompo, ary tandremo ny asanareo, fa ao amin'ny Tompo Andriamanitsika, tsy mba misy tsy fahamarinana na fizahan-tavan'olona na fandraisan-kolikoly.
8Tao Jerosalema koa, rahefa tafaverina tao amin'io tanàna io izy ireo, dia nanendry Levita sy mpisorona ary loham-pianakaviana amin'Israely, Josafata, ho amin'ny fitsaran'ny Tompo sy ny adin'olona. 9Ka nanome didy azy izy nanao hoe; Hataonareo amim-pahatahorana an'ny Tompo izany sy amim-pahamarinana ary amin'ny fo mahitsy. 10Amin'ny ady rehetra entin'ny rahalahinareo monina any an-tanànany avy, ho aminareo, dia ny amin'ny momba ny fanavahana ny vonoan'olona samihafa karazana sy ny hoe lalàna, didy, fandaharana, fitsipika no aoka hohazavainareo tsara ny sainy mba tsy hanaovany izay hahameloka azy amin'ny Tompo sy tsy hiharan'ny fahatezerany aminareo sy amin'ny rahalahinareo. Izany no ataovy, dia tsy ho meloka hianareo. 11Indro Amariasa mpisorona lehibe, ho filohanareo amin'ny raharahan'ny Tompo rehetra; ary Zabadiasa zanak'Ismaely mpanapaka ny taranak'i Jodà, amin'ny raharahan'ny mpanjaka rehetra; ary ny Levita koa dia ho eo anatrehanareo ho manam-boninahitra. Matokia, ataovy ny asa, ary homba anareo anie Iaveh. >